Mmemme mgbakwunye na-abịa na Instagram n'oge adịghị anya | Gam akporosis
para Instagram ga - enweta ọtụtụ ọmarịcha atụmatụ dịka ha bụ mmemme mgbakwunye, na-ezo okwu dị na ozi nzuzo na ọrụ ndị ọzọ anyị ga-aza.
Instagram nke mere ka Reels gaa na Instagram Lite n'oge na-adịbeghị anya, ma ọ bụ Ndụ, nakwa na ọ ka nọ n’ọdịdị. Eziokwu ahụ n'oge na-adịghị anya iji gosi mmemme mmemmeO doro anya na ndị na-eweta ọdịnaya nke ikpo okwu a ga-enwe mmasị.
Alessandro Paluzzi ekerịtala nseta ihuenyo ebe i nwere ike zuru oke ịhụ ndị a ozi ọma. Ihe kachasị mkpa bụ mmemme mmemme ahụ hapụ ndị na-eweta ọdịnaya ma ọ bụ ndị na-eme ihe ntanetị ka monetize ọrụ na ha na-ebu site na netwọkụ mmekọrịta.
#Instagram na-arụ ọrụ na "Mgbakwunye"? pic.twitter.com/YDGXCC3b4z
Este mmemme mgbakwunye ohuru ga adi na okike ngalaba nke ngwa. Site n'ebe ahụ, ị ​​ga - agbaso usoro ole na ole iji debanye aha maka mmemme ahụ, ọ bụ ezie na egosiri ya, ndị ọrụ niile agaghị adị na ya.
#Instagram na-arụ ọrụ na ngalaba "Njikwa ọdịnaya"?
Na nkebi a ị nwere ike mechie ụfọdụ okwu. Direct ozi na-ebu okwu ndị a ga-ezo na-ele ha na ị ga-enweta na ha. pic.twitter.com/2oDq3ukqdB
Ihe ohuru nke Instagram ga-abụ ntọala ọhụrụ maka "Njikwa ọdịnaya". Kedu nke ga enyere ndi oru aka ichota otutu okwu di n’ime ozi ha natara. Instagram se ga-ahụ maka izochi ozi niile nwere Keywords ọ bụla na site na ngalaba nzuzo anyị nwere ike ịbanye n'otu n'otu. Nnukwu ihe na-enweghị mgbagha.
Ọzọ nke ntọala ahụ onye ọrụ mmepe a bụ koodu achọtara "Brightness.AI", na site na aha ọ ga-egosi oke maka nchapụta nke ihe oyiyi; na AI ahụ nke nwere ike ịnwe mgbanwe na akpaghị aka nke Instagram na-arụ mgbe anyị ga-ebipụta, mgbe ọ bụla anyị pịa mkpanaka anwansi ahụ.
A na-ekwu ihe a niile, ihe omuma ndi ohuru nke Instagram a no n’iru, n'ihi ya, anyị ga-echere ntakịrị iji nwee ike ịnụ ụtọ ha site na ekwentị anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » N'oge na-adịghị anya Instagram ga-eweta mmemme mgbakwunye, isiokwu na-ezo na posts na ndị ọzọ